Wasabi ဆိုတာ ဘယ်ကရတာလဲ?? In:Kawi Eats, National Food
ဝါဆာဘီဆိုတာ ဆူရှီစားတိုင်း မရှိိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့၊ ဆူရှီနဲ့တွဲစားလေ့ရှိတဲ့ အစိမ်းနုရောင်အမှုန့်လေးတွေကိုပြောတာပါ။ ဆူရှီဆိုင်တွေမှာ အမြဲတွေ့ရသလို ကိုယ်တိုင် အပြင်မှာလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အခု စားနေ၊ ပြောနေတဲ့ ဝါဆာဘီတွေက အစစ် ဟုတ်၊ မဟုတ်တော့မသေချာပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဝါဆာဘီကို ဘယ်ကရတယ်ဆိုတာသိရင်တော့ အဖြေရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ဝါဆာဘီက ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ကြည့်လိုက်ရင်တော့ အမြစ်လို့ထင်ရပါတယ်။ အမှန်တော့ အဲဒါက ဝါဆာဘီအပင်ရဲ့ ပင်စည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ထွာစာလောက်ရှိတဲ့ ဝါဆာဘီပင်စည်လေး ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ အချိန်(၁၂)လကနေ (၁၈)လလောက် ကြာမြင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝါဆာဘီဟာ အရမ်းစျေးကြီးပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကိုစိုက်ပျိုးရတာ လုံးဝမလွယ်ကူပါဘူး။ ရေစီးဆင်းနေဖို့လိုအပ်သလို မြေကြီးပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါသေးတယ်။ ဝါဆာဘီကို အများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာတောင် ဝါဆာဘီစိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့ နယ်မြေအများကြီးမရှိပါဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့ ဝါဆာဘီတွေအကုန်လုံးက အစစ်ဖြစ်မယ်လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ ဝါဆာဘီကို ဆူရှီနဲ့မှမဟုတ်ပဲ အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ပြီး စားကြပါတယ်။ ဝါဆာဘီ ရေခဲမုန့်၊ ဝါဆာဘီ Kit Kat အပြင် ဝါဆာဘီ ဘီယာတောင် ဂျပန်နိုင်ငံမှာရရှိနိုင်ပါတယ်။ ...
Vietnam နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး street food (၄) မျိုး In:Kawi Eats, National Food
Vietnam နိုင်ငံသားတွေက ရိုးရာကိုအရမ်းတန်ဖိုးထားကြပါတယ်၊ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်လာရင်လည်း သူတို့မှာလုပ်နေကျ ရိုးရာဆိုတာရှိတယ်လေ။ သေချာပြောပြရမယ်ဆိုရင် ဒေသတိုင်းလိုလိုနဲ့ မိသားစုတိုင်းက အရသာရှိတဲ့အစားသောက်တွေ ချက်ပြုတ်ကြသလို အချင်းချင်းလည်းမျှဝေကြပါတယ်။ Vietnam ရဲ့လူဦးရေတစ်ဝက်လောက်က စိုက်ပျိုးရေး ဒါမှမဟုတ် စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးတွေမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး နေထိုင်ကြပါတယ်။ နောက်ပြီး Vietnam ရဲ့ဘယ်လမ်းထောင့်ကိုပဲကြည့်ကြည့် စားသောက်ဆိုင်လေးတွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ အခုပြောပြပေးမှာက Vietnam နိုင်ငံရဲ့များပြားလှတဲ့ အစားအစာတွေထဲကမှ မြန်မာတို့ကြိုက်မယ့် အစားအစာ4မျိုးကိုပြောပြပေးမှာပါ။ Bo La Lot (အမဲသားကွမ်းကပ်ကင်) အမဲသားကွမ်းကပ်ကင်ဆိုတဲ့အတိုင်း အမဲသားပါးပါးလေးလှီးထားတာကို ကွမ်းရွက်နဲ့ကပ်ပြီး မီးခိုးငွေ့ငွေ့လေးနဲ့ ကင်ထားတာပါ။ စားခါနီးကျရင်အပေါ်မှာ မြေပဲလေးတွေဖြူးပြီး အချဉ်ရည်စပ်စပ်လေးနဲ့ တို့စားရတာပါ။ Vietnam မှာဆိုရင်တော့ အရမ်းနာမည်ကြီးပြီး မစားဘူးလို့ငြင်းပယ်ဖို့ တော်တော်ခက်ခဲတဲ့အစားအစာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Pho Pho ဆိုတာက Vietnam အစားအသောက် လို့ပြောလိုက်တိုင်း တန်းသိကြတဲ့ နာမည်အရမ်းကြီးပြီး တစ်ချိန်ကရာဇဝင်တွင်ခဲ့တဲ့ ရိုးရာအစားအသောက်တစ်ခုပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ မုန့်ဟင်းခါးလိုပေါ့။ သူ့ရဲ့အသက်က အသားပြုတ်ရည်မှာပါ။ ဆန်ခေါက်ဆွဲလေးတွေအပေါ်မှာ အမဲသားစိမ်း/ ကြက်သားစိမ်း ပါးပါးသေးသေးလေးတွေကိုထည့်ပြီး အပေါ်ကနေ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ အမဲသားပြုတ်ရည်ပူပူလေးကို ဆမ်းလိုက်တာပါ။ အဲဒါကိုမှ နုတ်နုတ်ဆင်းထားတဲ့ နံနံပင်လေးတွေ၊ ငရုတ်သီးလေးတွေ နဲ့ ကြက်သွန်နီလေးတွေကို ဖြူးထားတာပါ။ Vietnam နိုင်ငံရဲ့ ဘယ်စားသောက်ဆိုင်မှာမဆို စားလို့ရနိုင်တဲ့ အစားအစာတစ်ခုပါ။ Bánh Tráng Me ဒါကတော့ ကြွပ်ကြွပ်လေးတွေစားရတာကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ခံတွင်းတွေ့စေမယ့် Vietnam သရေစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ နှမ်းကပ်ဆန်မုန့်ကြွပ်လေးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မုန့်ကြွပ်တွေဆို ဒီအတိုင်းအလွတ်စားကြတာများတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ဒီမုန့်ကြွပ်တွေကိုကျတော့ ငရုတ်နှစ်စပ်စပ်လေးနဲ့ တို့စားရတာပါ။ မြန်မာတို့အတွက် ခံတွင်းတွေ့စေမယ့်သရေစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Gôi Cuôn (Rice paper spring rolls) ဒါလေးကတော့ ကော်ပြန့်လိပ်လေးပါ။ အစိမ်းကြီးဆိုပြီးမကောင်းဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။ စားလို့ဝါးလို့ကောင်းလွန်းတာကြောင့် သိပ်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ Vietnamese street food တစ်ခုပါ။ သူထဲမှာ အသားတွေမျိုးစုံအောင် ထည့်ပြီး စားလေ့ရှိကြပါတယ်။ နောက်ပြီး… ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ အရွက်စိမ်းလေးတွေ၊ ကြာဇံလေးတွေ၊ သခွားသီးပါးပါးလေးတွေကိုပါ ကော်ပြန့်လိပ်တဲ့အပြားလေးနဲ့ ထည့်လိပ်ထားတော့ ဝါးလိုက်ရင် ကြွပ်ဆက်ဆက်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းပြီး ဆိုင်တိုင်းလိုလိုရပါတယ်။ အရွက်မကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံ ထည့်ခိုင်းလို့ရပါတယ်နော်။ ...
Sri Lanka ရဲ့ သစ်သားပန်းသီး In:Kawi Eats, National Food
သစ်သားပန်းသီးဆိုလို့ သစ်သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ပန်းသီးပုံကြီးလို့ မမြင်ယောင်လိုက်ပါနဲ့။ အခုပြောပြမယ့် သစ်သားပန်းသီးဆိုတာက Wood Apple လို့ခေါ်တဲ့ စားလို့ရတဲ့အသီးတစ်မျိုးပါ။ Sri Lanka ရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အသီးတွေထဲက အမျိုးအစားတစ်ခုပေါ့။ သူ့ပုံစံက အုန်းဆံတွေခွာထားတဲ့ အုန်းသီးနဲ့တူပါတယ်။ သူရဲ့အပြင်ကအခွံမာပေမယ့်၊ သူ့ရဲ့အနံ့က ဘယ်လောက်ထိပြင်းလဲဆိုရင် ဈေးထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ သူ့ကိုမတွေ့ရခင်ကတည်းက ချဉ်စုပ်စုပ်အနံ့ကိုအရင်ရမှာပါ။ သူကအနံ့ပြင်းလေ ပိုမှည့်လေ၊ ပိုမှည့်တော့ပိုစားကောင်းလေပါပဲ။ သူကအပြင်ကအခွံကိုခွဲပြီး အထဲကအနှစ်ကိုစားရတာပါ။ အထဲကအနှစ်က မန်ကျည်းနှစ်လိုလို၊ စပျစ်အချဉ်ဖောက်အနှစ်လိုလို ညိုပုပ်ပုပ်အရောင်ရှိပြီး ပျော့ပျော့ပျစ်ပျစ်ကြီးဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ကြည့်ရဆိုးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အရသာကိုတော့ ပုံစံကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးနော်။ သူ့ရဲ့အရသာကိုပြောရမယ်ဆိုရင် မန်ကျည်းသီးအရသာလေးနဲ့ တူသလိုလိုရှိပြီး စားလို့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ သူ့ကိုဒီအတိုင်း အခွံနွှာပြီးအစိမ်းစားလို့ရသလို ထန်းလျက်၊ သကြား၊ ရေ တို့နဲ့ရောပြီး smoothie လေးတွေလည်း လုပ်သောက်လို့ရပါတယ်။ တော်တော်များများကတော့ smoothie လုပ်သောက်ကြတာများပါတယ်။ Sri Lanka ကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါ တွေ့တဲ့သူတိုင်းကို wood apple ကြိုက်လားမေးကြည့်လိုက်ပါ။ သေချာတာကတော့ မကြိုက်ဘူးလို့ဖြေမယ့်သူဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် ဒီအသီးကို ဥသျှစ်သီးလို့သိကြပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်အခေါ်ကတော့ Bael ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာ တွေ့ရများပြီးတော့ အသီးအမှည့်ကို ထန်းလျက်နဲ့ခေါက်စားကြတာမျိုး၊ အသီးအစိမ်းကို ငပိ၊ ငရုတ်သီးတို့နဲ့ သုပ်စားကြတာမျိုးရှိကြပါတယ်။ ...
တမူထူးခြားတဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ အုန်းထမင်း In:Kawi Eats, National Food
Malaysia အစားအစာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတိုင်းရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာ Nasi Lemak ဆိုတာ စွဲနေပြီးသားပါ။ ဟုတ်ပါတယ်….. Nasi Lemak ဆိုတာ Malaysia နိုင်ငံသားတွေသာမက နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေပါ သိပ်ကြိုက်ကြတဲ့ Malaysia အစားအစာတစ်ခုပေါ့။ Nasi Lemak ဆိုတာက English လိုဆိုရင် “rice in cream” ဖြစ်ပြီး မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ “အုန်းထမင်း” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ အုန်းထမင်းဆိုပေမယ့် အုန်းနို့နဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘဲ အုန်းနှစ်နဲ့ချက်ထားတာပါ။ အရင်ဦးဆုံး ဆန်ကို အုန်းနှစ်နဲ့စိမ်ထားပြီးမှ ပေါင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ အုန်းနှစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် သူ့ရဲ့အရသာက ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာ မစဉ်းစားရသေးခင် မကျက်ခင်ကတည်းက အနံ့လေးနဲ့ လူတကာကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ တချို့ကတော့ ထမင်းအိုးတည်နေရင်း အနံ့ပိုကောင်းအောင် ဂျင်း၊ စပါးလင် တို့ပါထည့်ပြီး တည်ကြပါတယ်။ ပြီးမှ ငှက်ပျောရွက် ဒါမှမဟုတ် ပန်းကန်ထဲ ထည့်ပြီး စားကြတာပါ။ သူ့ချည်းပဲစားရင် အီတတ်တဲ့အတွက် အရံအနေနဲ့ ငရုတ်နှစ်အစပ်၊ သခွားသီး၊ မြေပဲလှော်၊ ငါးခြောက်ကြော်သေးသေးလေးတွေနဲ့ အသားဟင်း ဒါမှမဟုတ် အသားကြော်တို့နဲ့တွဲပြီး စားကြပါတယ်။ တချို့တွေကတော့ အသားအစား သနပ်တွေနဲ့ တွဲစားလေ့ရှိကြတယ်။ ဘယ်လိုပဲစားစား ဒီလိုအရသာစုံလင်တဲ့ Nasi Lemak လေးကတော့ စားဖူးတဲ့သူတိုင်းအတွက် တစ်သက်တာ မမေ့နိုင်တဲ့ ထမင်းတစ်ပွဲပေါ့နော်။ ပြီးတော့ မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေက Nasi Lamak ကို ဘယ်လောက်ထိကြိုက်ကြလဲဆိုရင် ထမင်းအပြင် Nasi Lemak Burger, Nasi Lemak cake နဲ့ Nasi Lemak ice-cream ဆိုပြီးပါ ဆန်းသစ်တီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရင် Nasi Lemak လေးနဲ့ဒီ Nasi Lemak အရသာရှိတဲ့ မုန့်လေးတွေကို စားဖြစ်အောင်စားခဲ့ဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါရစေ။ ...
Wasabi ဆိုတာ ဘယ်ကရတာလဲ In:Kawi Eats, National Food
အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ စားချင်စဖွယ် မနက်စာ ၅ မျိုး In:Kawi Eats, National Food
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အာရှနိုင်ငံတွေက လှပတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ် ကျော်ကြားရုံတင်မကပါဘူး။ အစားအသောက်မှာလည်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ မျက်စိကျကြတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ သင်စားကြည့်သင့်တဲ့ အစားအသောက်တွေလည်းပါတာ အသေအချာပါပဲ။ ဒါကြောင့် အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ မနက်စာ ၅ မျိုးကို အရင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးမနက်စာ ဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ပိုင်းဆိုတာနဲ့ ဆိုင်လေးတွေတိုင်းမှာ Banh Mi Op La ကိုစားဖို့ လူပြည့်နေတတ်ပါတယ်။ ပြည့်လည်း ပြည့်လောက်အောင် မြင်ရတဲ့အတိုင်း စားချင်စရာကောင်းလွန်းပါတယ်။ ကြက်ဥနှစ်လုံးကို မကျက်တကျက်လေး ကြော်ထားတဲ့ပေါ်မှာ အသားတွေကို တင်ထားတာပါ။ ဒါကို ပေါင်မုန့်ကြမ်းလေးနဲ့ ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့ တွဲစားပြီးရင်တော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မနက်ကလေး စတင်လိုက်ရသလို ခံစားရမှာပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အစားအစာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ထမင်းကြော်နဲ့ ကြက်ဥပါ။ ဒါပေမယ့် ထမင်းကြော်နည်းကလည်း မတူသလို ကြက်ဥကို ကြော်ထားတာကလည်း ထူးခြားပါတယ်။ Omurice က ထမင်းကြော်ပေါ်မှာ တင်တဲ့ ကြက်ဥကြော်နဲ့ နာမည်ကြီးတာပါ။ ကြက်ဥမွှေကြော်ကို အပြင်ပိုင်းလေးတင် ကျက်အောင်လုပ်ပြီး အတွင်းပိုင်းက အနှစ်လေးတွေလို ဖြစ်အောင် ကြော်ထားတာပါ။ ကြော်ရတာ တော်တော်လည်း လက်ဝင်သလို စားရတာလည်း တစ်မျိုးကောင်းပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ Sri Lanka ရဲ့ Kiribath က အုန်းနို့နဲ့ချက်ထားတဲ့ ထမင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ အုန်းထမင်းတဲ့ မတူပေမယ့် အုန်းနို့နဲ့ချက်ထားတာချင်းတော့ တူပါတယ်။ သူတို့က ထမင်းကို အုန်းနို့နဲ့ စေးနေအောင်ချက်ပြီးတော့ အပေါ်ကအချဉ်လေးတင်ပြီး စားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံလေးကြည့်တာနဲ့တင် စားချင်စရာကောင်းနေပါပြီ။ n ဒါကတော့ မလေးရှားအစားအစာဖြစ်ပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ လုံးဝမစိမ်းပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီမှာလည်းစားလို့ရတဲ့ ပလာတာနဲ့ အာလူးဟင်းနဲ့လိုမျိုး သိပ်မကွာလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ Roti Canai လေးကပိုစားကောင်းမယ့်ပုံပါပဲ။ ဒါကြောင့် မနက်ခင်းလေးမှာ စားလိုက်ရမယ်ဆိုရင် ရှယ်ပဲပေါ့နော်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှမ်းဟင်းထုပ်ရောစားဖူးကြလား မသိဘူး? Tamales ဆိုတာ Philippines နိုင်ငံရဲ့ ဟင်းထုပ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ သူတို့လည်း ဖက်နဲ့ ထုပ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖက်နဲ့လဲဆိုရင် ပြောင်းဖူးဖက်နဲ့ပါ။ ဒါလေးကို မနက်ခင်းမှာ ကော်ဖီလေးသောက်ပြီး စားလိုက်ရမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့မနက်ခင်းလေးက ကောင်းသောစတင်ခြင်း ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ မနက်စာတွေထဲမှာ စားကြည့်သင့်တာတွေကိုတော့ သိသွားလောက်ပါပြီ။ နောက်ထပ် ဘယ်လိုစားကြည့်သင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ လာဦးမလဲဆိုတာတော့ … စောင့်ကြည့်လိုက်ပါနော်… ...